Akara 9.0 achịcha dị ugbu a: Nwelite dị maka Google Pixel | Gam akporosis
Otu n'ime ihe omimi kachasị njọ nke ọnwa ndị a bụ ihe ga-abụ aha gam akporo P. Ọtụtụ nhọrọ e atụle, ma mgbe nile aha nke a ụtọ. Ma, ọ dị ka anyị agaghị echere ọzọ ịchọpụta ihe a. N'ihi na aha ahụ a họọrọ maka ụdị a ka ekpughere n'ikpeazụ. Android 9.0 achịcha bụ ugbu a gọọmentị.
Zọ e si mee ya ka ọ bụrụ gọọmentị abụghị nke ọdịnala ọdịnala, n'ihi na ọ bụ site na nwelite maka Google Pixel na anyị maaraworị banyere ịdị adị nke gam akporo 9.0 achịcha. Google enweghi mgbagwoju anya, ha ahọrọwo achịcha (achicha) dị ka aha maka ụdị a.
Enweghị ịdọ aka ná ntị, na akụkọ a na-atụghị anya ya. Google Pixel enwetaworị nnweta mmelite na gam akporo 9.0 achịcha. Ezigbo ozi ọma maka ndị ọrụ nwere ụdị nke ụlọ ọrụ ndị America. Ebe ọ bụ na ha ga-abụ ndị mbụ na-enwe a ukara version.
A haziri ngosipụta nke nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ maka August 20, ọ dị ka ọ na-aga n'ihu. Ọ bụ ezie na tupu ụbọchị a anyị amaworịị isi nkọwa gbasara ya. Akụkọ na ọ ga - ahapụ anyị ka anyị matala ekele maka ụdị dị iche iche gara aga nke ọnwa ndị a.
Ọzọkwa, ọbụghị naanị Google Pixel ga-enwe ọ Androidụ gam akporo 9.0 achịcha. Ọzọkwa igwe nwere gam akporo Otu anatala ya. Yabụ ọ bụ mmelite buru ibu nke ụlọ ọrụ America na-ewepụta ozugbo. Ọzọkwa ekwentị ndị dị na gam akporo P betas enweworị mmelite a dị, ma ọ bụ ga-enwe ya na elekere ole na ole sochirinụ.
A na-atụ anya na Android 9.0 Pie OTA maka Google Pixel dị taa.. Restdị ndị nke ọzọ kwesiri ịnwe ya n'otu oge, mana enweghị ụbọchị akọwapụtara akọwapụtara n'oge ahụ. Ugbu a bụ oge ịnụ ụtọ akụkọ niile na ụdị sistemụ arụmọrụ a na-ahapụ anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » A gam akporo 9.0 achịcha dị ebe a: Chọpụta nkọwa niile